Ny lahatsoratr'i Sheryl Jones momba ny Martech Zone
Lahatsoratra nosoratan'i Sheryl Jones
Sheryl no matihanina momba ny varotra Sr. ao Uplers izay manana traikefa lehibe amin'ny famolavolana ny dian'ny mpampiasa efa voafaritra tsara manerana ny sehatra marketing nomerika. Mampiasa ny fahaizany mivarotra nomerika izy hanampiana ny orinasa hisarika ROI manan-danja.
Alatsinainy Oktobra 26, 2020 Alatsinainy Janoary 10, 2022 Sheryl Jones
Woocommerce no malaza indrindra ary azo lazaina ho iray amin'ireo plugins eCommerce tsara indrindra ho an'ny WordPress. Izy io dia plugin maimaim-poana izay tsotra sy mahitsy hapetraka sy ampiasaina. Tsy isalasalana fa ny fomba tsara indrindra hanovana ny tranonkalanao WordPress ho fivarotana e-varotra miasa tanteraka! Na izany aza, mba hahazoana sy hitazonana ny mpanjifa dia mila mihoatra ny fivarotana eCommerce matanjaka ianao. Mila paikady marketing mailaka matanjaka ianao mba hitazomana ny mpanjifa ary hamadika azy ireo